Khariidadda Islamabad Khabiirka Siyaasadeed 2 Siyaabaha Loo Beddelayo Spam Referrer In Google Analytics
Spam u gudbinta waa taraafigga xaasidnimada ah ee ku dhuftey boggagaaga xiriirada shaki, sida darodar.com, iyo kuwo kale. Google Analytics ayaa si toos ah u tilmaamaya meesha uu gaadiidku ka imanayo iyo inta imisa jeer oo booqasho ku bixiso goobtaada.
Sohail Sadiq, khabiir hormood ah oo ka socda Semaat , wuxuu halkan ku siinayaa talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan arrintan
Haddii aad hesho gaadiidka gudbinta, fursadaha ayaa ah in dadka martida ah ee goobtaada aysan ku qarashgareynin wax ka badan hal bog oo ku yaala bogaggaaga, qiimaha boodhku wuxuu noqonayaa 100%. Waa suurtagal in la abuuro shaandheyn ka baxsan taraafikada laga soo gudbiyo domains shaki leh - cordiant rehvid ee. Marka ay timaado in la mamnuuco soo-dirayaasha, waa inaad hubisaa inaad ka hortagayso hits-ka ka yimid goobaha sheyga iyo kuwa khatarta ah. Waa inaad sidoo kale ka saartaa xisaabta Google Analytics sida ugu dhakhsaha badan. Falanqeynaha ka-reebitaanka gudbinta ee la soo gudbiyo waxay shaqeynayaan marka la barbardhigo qaababkaaga shaandhaynta oo aad ku dhufatey qiimaha aad ka heshay cabbirkaaga Ololaha.
Sidee buu Spam u shaqeeyaa?
Laba sano ka hor, spammer Ruush ah oo lagu magacaabo Vitaly Popov ayaa lagu jabiyay koontada Google Analytics waxana uu si guul leh u geliyey ilo-wareejinta spam. URL-yada dhabta ah waxay keenaan bogag internet ah oo cajab ah waana inaan lagu tirin sidii loo gudbin lahaa..Ma aha markii ugu horeysay ee ay jabhadayaashu sameeyaan wax sidan oo kale ah, Alan Bush oo ka soo jeeda Ignite Muuqaalka ayaa sheegaya in ay jiraan barnaamijyo badan oo isbaaro ah iyo barnaamijyo gudbin ah oo samaynaya raadinta bini-aadaminta iyo websaydhada adeegyo SEO ah oo been abuur ah. Waxaa lagu xakameyn karaa bogagga warbaahinta bulshada, shabakadaha cinwaanka bulshada, iyo dhammaan goobaha kale ee madadaalada madow.
Sidee loo tirtiraa Spam Referrer
Way # 1: Ku dar Wadanka Kutubta Filinka
Waxaad ku dari kartaa muuqaalka koontada sirta ah si aad uga takhalustid spam gudbinta. U gudub Maamulaha> Filters> Filter Custom> Luuqadaha Xulashada, oo abuuro shaandheyn cusub oo aad ku dari karto bogag intaa ka badan oo shaki ah sida aad rabto. Haddii aad leedahay fikrado aan sifudud lahayn, waa inaad ku dartaa iyaga si aad uhesho shaandhada oo ha ilaawin inaad magacawdo fiilooyinkaaga sida darodarada, barta internetka iyo kuwa kale.
Way # 2: Abuuri qaybta gaarka ah
Waa suurtogal in la abuuro qaybo cusub oo ka mid ah Qodobbada> Qaybta / Qeybta Dhexe. Nidaamkan, si kastaba ha ahaatee, waa mid waxtar leh haddii aad haysatid taraafikada socdaalka iyo darajadaada boggaaga ay khasaarto sababtoo ah
Haddii aadan jeclayn inaad waqti badan ku bixiso adigoo raacinaya spameriyeyaasha iyo goobaha gudbinta shaashooyinka, waxaad aadi kartaa qaybta Google Analytics ee qaybta "Solutions Gallery" halkaasoo aad si sahlan u kala saari karto spam gudbinta. Iska hubi inaad kala qaybsan tahay si aad u tirtirto gudbinta ay soo gudbisay shabakada Analytics iyo waxay soo saartay dhammaan xaashiyadii dhibta ka soo gaartay warbixinta Google Analytics.
Waa wax laga qoomameyn karo in spameradu sii socdaan siyaabo fiican oo wax ku ool ah oo loo adeegsan karo spam, laakiin ma jirto wax laga walwalo. Waa qayb ka mid ah shaqadaada si aad uga takhalustid oo aad sii wadatid fayradaha halkaa oo si joogto ah loogu dari karo goobaha la soo sheegay. Waa in aad maskaxda ku haysaa in aysan jirin hal-cabbir-dhan-xal oo dhan si aad uga takhalustid spam u gudbinta si joogto ah, laakiin waxaad ka tirtiri kartaa, ogaan kartaa iyo cusbooneysiineysaa adigoo dejinaya goobaha ku jira xisaabta Google Analytics. Haddii aad waligaa heshay spam gudbinta ah ee koontada Google Analytics, waa inaad isla markiiba abuurtaa shaandhada.